Kokuhlaziywa komnotho wenarha yabo boke ezisemadolobheni nakwezolimo
Njengoba isiqondiso umthetho yokubuyiselwa komhlaba futhi elungiselelwe inqubo yokuthengisa (ukudayiswa) endaweni. Kulo mongo iba efanele umbuzo kangakanani kufanele ibize. Futhi kulokhu, iza ukusiza ukulinganisa komnotho wenarha yabo boke.
Kunzima yokugcizelela ukuthi kubaluleke iyona zihlolisisa komhlaba imithombo. Phela, kokuhlaziywa kwezomnotho - luyisici esiyinhloko e inkontileka. Kungakhathaliseki ukuthi kuyoba - ukudayiswa noma yerenti, kodwa umthengi nomthengisi unesithakazelo ekuchubeni elilungile kakhulu intengo ngamunye. Ukuze uthole imiphumela emihle, isingeniso kwenzeka kokubili amarekhodi ahlukene, futhi ngqo kusayithi. Phela, ngisho esimweni indawo yayo elula kungenzeka ezweni angcolile, uzifihle amaphutha noma ngokucacile ezithile ukusetshenziswa. Ngakho-ke, ngamunye Icala akhethiwe uhlu ethize izindlela nokuhlaziya izindlela. Lokhu kukuvumela ukuba uthole ukuhlolwa Inhloso iningi izindleko. Ukuze ugweme amaphutha ngesikhathi izibalo evame ukusetshenziswa software.
Lapho labetibambile normative yokulinganisa yemali yezwe, kubhekwa hhayi kuphela izindleko ngqo kusayithi, kodwa izindlu efakwe kulo. Konke okufanayo Kulinganiselwa esekelwe isimo emakethe wamanje. I ukulinganisa komnotho wenarha yabo boke abantu emkhakheni wezolimo sihlanganisa izinhlelo zokubala kanye kwemigwaqo ekhona uhlelo olukhona cadastral. Ngakho, nathi singakwethemba kakade ukubala kusengaphambili, okuyinto kuyodingeka ichithe ama ngaphezulu, nokuthi isivele esimweni saso esiphelele - nje ifike ukukwenza. Eqinisweni, ngemva yokufuna izinzuzo kungenziwa igcwaliseke isikhathi esinganqunyelwe. Lena i umehluko obalulekile kusuka namanye amafa izwe ocacile kwesikhathi sokuphila. Ngakho-ke, ikhumbula imibono futhi uyakucabangela ukwehluka ngokusimama kwezinsiza zemvelo, ukusondela, inani labantu, futhi kungani kufanele zithathwe nendlela kuyazuzisa.
Imininingwane yalolu Russian Federation
Sinini yokulinganisa komnotho wenarha yabo boke, kubalulekile ukugxila indima ekhethekile kahulumeni. Kufanele ukwakha isisekelo zomthetho ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo ukuze zibonakalise kwemvelo kanye zisebenzisa kwezinsiza, uthuthukise inhlabathi okuzala, ukusebenza phezu kabusha inhlabathi kanye nokugcina izimo ezikahle zokuphila abantu. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni. Ekusebenteni, ngaphandle emakethe yomhlaba eRussia kunzima ngomqondo ovulekile ukuhlola ngenxa ezicini eziningana:
Nokungathuthuki omthetho kanye zokulawula nohlaka olubhekele.
Nokungathuthuki ezweni yemakethe lonke lelo zwe.
Ukucaciswa sento ethile.
Kulokhu kungenzeka nokuthi zokulawula zibiza malini umhlaba zizokwenziwa ezinamaphutha eside. Inkinga ikakhulukazi acute ezindaweni zasemadolobheni. Kwanele ukuvula iphephandaba njengoba ungafunda mayelana zimboni zokukhwabanisa noma etholakala maphakathi dolobhana futhi ukwenyuka kwesibalo emvelweni lapha. Izinkomba yokulinganisa komnotho wenarha yabo boke futhi ivumela ukuthola ngempumelelo enkulu kusukela ukubeka lutho insimu ethile.
Kwenzeka kanjani ukuba kwenziwe?
Indlela bheka yayingaqondiswa yokulinganisa komnotho wenarha yabo boke kwezolimo noma edolobheni? Ekuqaleni kunqunywa umbuso kwezomthetho. Ngalokhu ngiqonde ekuqhutshweni ngenhloso, ubunikazi kanye imvume yokusebenzisa. Ake sibheke into ngayinye ngabanye. Ngakho, injongo - isethwe ngumthetho neziqondiso ye-oda, umkhawulo nemibandela yokusebenza insimu ngokuvumelana injongo ethile ngaphakathi isigaba esithile. Ubude eRussia zingabantu eziyisikhombisa. Ngu izinhlobo impahla - ezweni kungaba amandla isimo, komasipala, abantu abazimele kanye nabanye abasebenzi. Ukuze imvume - ke kukhona iqoqo izingqinamba. Ngakho, ngokwesibonelo, izakhamuzi zithi angaphandle ngeke uthumele indawo eseduze komngcele. Kuyefana nasendleleni abanye kwezinye izingxenye ekhethekile.
kokuhlaziywa Economic komhlaba wezolimo engenziwa kuphela engxenyeni kwegazi umphakathi. Ethandwa kakhulu ngokuya ukusetshenziswa ilungelo yangasese. Kodwa lokhu akulona ithuba kuphela ngokuya ubunikazi. Akubalulekile okwamanje, futhi akhohlwe ukuthi kukhona ilungelo ukusetshenziswa esiphakade phakathi ubunikazi kamasipala noma isimo. Ezimweni ezinjalo, izwe lingelakho iziphathimandla ohulumeni federal ahulumeni. Land nge isimo esinjalo singeze sibe uzokwenza inhlokodolobha izinhlangano kwezohwebo. Kodwa-ke kungaba kuqashwe. Ezimweni ezinjalo, ukusetshenziswa elinganiselwe ngaphansi imigomo yesivumelwano waphetha ngesikhathi. Kukhona wena anqunyiwe ilungelo ukulahlwa. kokuhlaziywa komnotho wenarha yabo boke ezisemadolobheni ezimweni ezinjalo ezazifunwa wetimali imali, okuzokwenza ukwamukela umqashisi ngesisekelo ikhono lokufeza imisebenzi futhi ikhumbula indawo yayo.
Izici isimo noma endaweni kamasipala
Ukusebenzisa kwabo ebolekiswe iphuzu ethize: abavunyelwe ukushintsha injongo yabo ehlosiwe. Kodwa lokhu akulona isimo kuphela. Uma lokhu kuhlola komhlaba noma zezimboni ngokwenelisayo izindawo zolimo lomuzi, kufanele silandele kabanzi ukulinganiselwa okunjalo:
Akuvunyelwe usebenzise isayithi ngendlela, lokhu kwaholela ekubeni phansi kwemvelo, ukuncishiswa kwenhlabathi nasekulondolozweni izimo ezweni nokucekelwa.
Awukwazi bafeze imisebenzi ezindaweni lungadizayinelwe le njongo. Ngakho, ngokwesibonelo, umhlaba wokulima awukwazi ukwakha isakhiwo.
Akuvunyelwe ukuthengisa kanye irenti.
Okunye nezidingo ezibekwe yimithetho kahulumeni kanye nezinye izenzo normative wezomthetho RF izinhlangano ephambili futhi neziphathimandla zendawo.
Ukugunyazwa abafanele esikhishwa iziphathimandla imibhalo efanele. Lokhu ucabangela yezinjongo eziyinhloko yokulinganisa komnotho wenarha yabo boke, okuyinto ikuvumela ukuba sinqume ukuthi singakanani ke kuzodluliselwa. Ngakho, wezolimo ihlaba umkhosi lemali okuzisholo (ngokuya inzuzo), kodwa ukukhiqizwa uwoyela noma amaminerali - ke zako kungenye indaba.
Ukuze uzwisise mayelana ukuthi kubiza malini endaweni ethile usebenzisa izindlela eziningana ezahlukene. Generalizing indlela komhlaba yokulinganisa:
indlela Cadastral. Lenchazelo ukubaluleka lonke izwe ngaphakathi kwemingcele zokuphatha-indawo iyunithi (esifundeni, isifunda, idolobha, idolobha). Ezimweni ezinjalo, ukubaluleka agqoke ithuluzi ubalwa kusetshenziswa lobu ubuhlobo zezibalo (ngamanye amazwi, 100 ar kulinganiselwa ngaso ayizinkulungwane 10, ngaleso sikhathi owayesengomunye - kuba 100 k.).
Ukulinganisela olulodwa. Le ndlela isetshenziswa ukunquma inani lemakethe bezwe anikezelwe usuku (ie usuku lapho ochwepheshe abazimele ukunikeza umbono umbono wakhe ukuthi ukukhokhela indawo).
Ukuze uthole imiphumela emihle, kwenziwa ukuhlanganiswa izindlela ezintathu: izindleko, ukuqhathanisa kanye engenayo. Inani okuholela kuchazwa njengoba izindleko. Asithathe kancane ngazo ngokuningiliziwe.
Ekuqaleni, ake siphawule nenzuzo. Kuyaphawuleka kakhulu bhizinisi ngoba ikuvumela ukuhlola ukubaluleka izwe esekelwe inani inzuzo ukuthi ufuna ukuthola umthengi ezingaba khona. Indlelanchubo yekusebentisa imali kusekelwe ezimisweni ezintathu:
The ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI ukusetshenziswa.
Njengomthetho, bezimali kanye osomabhizinisi bethola kulo umhlaba ukuze uthole imali ukheshe noma ezinye izinzuzo. Ngakho-ke, uJesu oyisibonelo esikhulu kunazo isithakazelo engenayo indlela ngabo. Ngokuqhathanisa isetshenziswa emazweni lapho kukhona umhlaba emakethe yathuthukiswa, futhi intengo kunqunywa ngesisekelo izindleko kwamanye amasayithi. Indlelanchubo yekusebentisa izindleko kunikeza yeluhlolo kusukela isikhundla ukuthi endaweni ngeke ukhokhelwe imali engaphezu kuka-uzobe esichithwa ukwakhiwa zonke izakhiwo ezidingekayo.
Kungakhathaliseki noma cha ukuze afeze kokuhlaziywa komnotho wenarha yabo boke ezisemadolobheni noma izinjongo yasemakhaya, ezimbonini noma kwezolimo, kufanele kukhunjulwe ukuthi indlela jikelele kule ndaba yodwa. Futhi sidinga unamathele ukwamukelwa of yezifiso ukulandela lapho ehlolisisa deal ngeke nilenze.
Yini ifilimu "Annabelle"? "Annabelle": sakhiwo kanye nokubuyekeza of the movie
Itshwayo lesiTjhaba ka Tyumen futhi yaseTyumen. Kufanekisa kanye nencazelo
Injini PMZ-640: idivaysi, yesikhashana